Kusukela kwesokunxele: uNksz Hlengiwe Ngcobo, uNkk Shereen Revashunkar kanye noNksz Lungile Ntola.
Amalungu amathathu abasebenzi eThekwini kwiKolishi lezifundo zokuPhatha kanye noMthetho bathathe ithuba eliyingqayizivele eliwumgomo ohlinzekwa iNyuvesi ukuba abasebenzi bakhona babe nethuba lokufunda ukuze bakwazi ukwenza kangcono imisebenzi abayenzayo kumphakathi wase Nyuvesi.
UNksz Shereen Revashunkar oqhamuka kwiSikole sokuPhatha, ezobuChwepheshe kanye nokuBusa, uklonyeliswe ngeziqu zeqhuzu le-Maters kwezokuPhath’amaBhizinisi, ngesihloko esithi: “ukusebenza kanye nokuphathwa kwabafundi abavela emazweni angaphandle, kwiFakhalthi yezifundo zokuPhatha, iNyuvesi yaKwaZulu-Natali”, ubelulekwa uDkt Mihalis Chasomeris.
KuRevashunkar, lolu kube uhambo nokho oluthelile izithelo ezinhle. Nakuba, evuma ukuthi ukuziqoqa, uzithibe kube iwona khiye wempumelelo yakhe kunoma iziphi izifundo ezifuze lezi. Ubeke wathi, ngikuqinisekisile ukuthi ukufunda kwami ebusuku akuthikamezi isikhathi somndeni kanye nesomsebenzi.
UNksz Hlengiwe Ngcobo, naye futhi oqhamuka kwisikole esifanayo, ujabule kakhulu ukuthi naye athweswe iziqu zeqhuzu le-Bachelor kwezokuPhatha amaBhizinisi phambi kwezingane zakhe ezingo-Abulele (6) kanye noNandipha (11). Ubeke wathi, ukubona umama wabo ethweswa iziqu kubanikeze inhlansi yalokhu abekwenza sonke isikhathi engekho eduze nabo ematasa engena izifundo zantambama.
UNKsz Lungile Ntola, okwiKolishi lokuPhatha izazimfundo, ophikweni lase Howard College, naye uthweswe iziqu ze-Postgraduate Diploma kwezokuPhatha.
Oka-Ntola uthe abazali bakhe bagxilisa isiko lokufunda esemncane, beqhubeka njalo nokumkhuthaza kanye nezingane zakwabo ukuba babeke imfundo phambili. Uthe ‘ukufunda kube uhambo olube nezinselelo kanye nenzuzo’. Uthe, ukuba nabangani abanombono ofanayo kumkhuthazile kakhulu kwenza izinto zalula.’ Kube ukuzinikela kanye nokusebenza kanzima… ngijabulile kakhulu ngethuba elinikezwa umqashi , UKZN, kubasebenzi bakhe’.
Oka-Ntola uthe, ukhuthazekile kakhulu ukuba aqhubeke afunde aye phambili.
Womathathu lamalungu athweswe iziqu ngesikhathi semicimbi ebikhona e-UKZN, mhla zi-18 kuMbasa. iKolishi lezokuPhatha lihalalilsele bonke abasebenzi laphinde labakhuthaza ukuthi baqhubekele phambili nezifundo zabo.